6 sababood oo tixgelin si loogu beddelo u rogista uumiga-nikootiinta nikotikada • Daroogada Inc.eu
6 sababood oo tixgelin si loogu beddelo u rogista uumiga-niktiinta-nikotiinta lahayn
Dadka badankood ee dareema nikotiinta waxay bilaabaan safarkooda wareega si ay uga fogaadaan dhibaatooyinka xun ee nikotiin. Vaping waa ka bedelista habka nicotine-ka, laakiin looma tixgelin karo in gebi ahaanba amaan yahay.
Iyada oo ay jiraan boqolaal aromas oo casiir vape oo laga heli karo suuqa, waxaa jira noocyo kala duwan oo aromas ah. Kuwa soo socdaa waa lix sababood oo aad uga fekerayso inaad ugu beddelato ku-beddelashada vaping-nic-free "nic-free" ah.
Waqti yar ha ku luminin oo aad urursatid kalooriyo aan faa'iido lahayn
Rabitaanka sonkorta badanaa waa wax aan hore loo arag marka sigaar cabayaashu joojiyaan cunista nikotiinta meelaha kale. Casiirka 'vaotine juice vapeine' oo bilaash ah ayaa ka caawin kara dadka isticmaala inay ka fogaadaan dhibaatooyinka noocaas ah. Waxaad ka heli kartaa dhadhan kala duwan oo la heli karo, waxaad ka heli kartaa dhadhanka miraha vape-ka ee aad ugu jeceshahay oo aad maamuli kartaa jeceshaaga sonkorta adigoo yareynaya ku tiirsanaanta nikotiinta. Nasiib wanaagse, xaalada CVEID, uma baahnid inaad soo booqato dukaan jireed si aad uga hesho dhadhankaaga, maxaa yeelay waad awoodid ka iibsato epods khadka tooska ah.
Samee caadooyin aan balwad lahayn
Markaad ka fikirtid taas, waxaa wax u tari karta inaad joojiso caado xun oo aad bilowdo mid kale. Taasi waa waxa aad sameyso marka aad uga weecato isticmaalka nikotiinta oo aad u beddesho cabitaanno dabiici ah oo nikotiin ah. Si kastaba ha noqotee, si ka duwan kan dambe, waxyaabaha loogu yeero cabitaannada vic-ka-bilaashka ah maahan wax qabatin.
Markaad sidaa sameysid, waad garaaci doontaa waxa aad jeceshahay adiga oo aan horumarin caado kale oo waxyeello leh. Casiirka nooca loo yaqaan 'Nikotine juice vapeine' oo bilaash ah kuma jiraan walxaha balwada leh, laakiin waxay qayb dheeraad ah u noqon karaan waayo-aragnimada vaping-ka. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku raaxeysan karto cabitaannada miraha vape-ka ah adiga oo aan ku jirin waxyaabaha maandooriyaha ah, waxyeellada aad u yar u geysaneyso jidhkaaga.
Noocyo badan oo ah qalimaanta vape (afb)
Ka bax sunta
Maqnaanshaha nikotiin, waxaad leedahay waayo-aragnimo nooc ka duwan oo ah cabitaannada vapein. Intaa waxaa sii dheer, cusbada nikotiinta ee caadiga ah waxaa ku jira qiyaastii 35-50 mg nikotiin. Casiirka loo yaqaan 'Vape juice' waxaa ku jiri kara qiyaastii 6-12mg oo nikotiin ah. Si kastaba ha noqotee, vaping gebi ahaanba amaan ma aha, sidaa darteed shaqsiyaadka waa inay sameyaan baaritaankooda kahor inta aysan ka rogin caado xun una roon mid ka fiican.
Qalin ka sameysan oo ay ka buuxaan cabitaanno ay ku jiraan nikotiin ayaa weli waxyeello leh. Bishii Janaayo 2020, kii Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada Gudaha Ameerika waxa ku dhinta 60 qof dhaawacyada sambabka ee ay sababeen sigaarka elektaroonigga ah iyo alaabada vape ee laga helo ilaha aan rasmiga ahayn.
Khibradaha dhadhaminta wanaagsan
Haddii aad raadineyso khibrad kaladuwan, cabitaannada macaan ee miraha la soo saaray ee daboolka laga qaaday ayaa kaa daboolay.
Casiirrada nikotiin ee aan lahayn nikotiinta waxaad ku yeelan doontaa waayo-aragnimo dhadhamin fiican oo aan dhadhamin u leh miraha nikotiin. Waa fursad lagu barto ku noolaanshaha la'aan, ku raaxeysiga dhadhannada kale oo aad hungurigaaga ka nasiso hufnaanta nikotiinta leh.
Waxaad qarash gareeysaa lacag yar
Inta badan sida caadiga ah, cabitaannada casiirka dabiiciga ah ee nikiciyaha ah way ka raqiisan yihiin kuwa leh nikotiinta. Way fududahay in la ogaado sababta. Nikotiin waa wax qabatin leh, iyo inaad lacag ku kharash gareyso wax jirkaaga wax u dhimaya ma ahan doorashada ugu fiican ka dib dhan.
Laakiin haddii aad rabto inaad ka tagto caado xumadaada oo aad lacag badan ku qarash gareyso waxyaabo kale, tagitaanka cabitaannada khamriga nikotiinta ee bilaashka ah waa mid fiican.
Fursad yar oo waxyeello leh
Nikotiinta waxay yeelan kartaa saameyn caafimaad oo aan wanaagsanayn. Inta badan isticmaaleyaasha adeegsada nidaamyada gudbinta nikotiinta waxay u eg tahay inay la dhibaatoodaan wixii ka dambeeya maaddada oo carqalad ku noqon karta caafimaadkooda ama ka dhigi karta inay si aad ah u jeclaadaan maaddada.
Vape ma gubiyo walaxda. In kasta oo nikotiinku uu maraayo habka gubashada ee nidaamyada kale ee keenista niktiinta, vapeine wuxuu kululeeyaa dareeraha iyo nikotiinta heerkul la habeeyay si loo siiyo dhadhanka finicse iyada oo aan lahayn gaasyo sun ah.
U beddelashada cabitaanno dabiici ah oo aan dabiici ahayn waxay u ekaan karaan in ay ku habboon yihiin kuwa raadinaya in ay ka tanaasulaan dhaqankooda waxyeellada leh. Waxay u fiicnaan kartaa kuwa jecel inay sigaar cabbaan oo raadsanaya meel deggan oo xasilloon.
Dabcan, la tasho khabiir haddii aad damacsan tahay inaad yareysid ku tiirsanaanta nikotiinta.
Xal ikhtiyaar kale ah
In kasta oo vaping ay magac u yeelatay suuqa sannadihii ugu dambeeyay, khubaradu waxay sheegeen in wax badan aan weli laga ogayn vaping iyo saamaynta ay ku leedahay jidhka. Xogta dartood, cilmi-baarayaashu ma bixin karaan jawaabo la taaban karo oo ku saabsan saamaynta muddada dheer ee uumi-baxa matoorku la'aan.
Markaad diyaar u tahay inaad ka dabacdo caadooyinka xun isla markaana aad bilowdo safarkaaga vape, waa inaad la socotaa wixii aad soo martay.
Kobcinta caadooyinka caafimaad ayaa waliba kaa caawin kara inaad ka adkaato qabatinkaaga balwadda. In kasta oo jirku uu dhismo astaamo la qabatin marka lagu arko waxyaabo gaar ah sida nikotiin, in laga baxo waxay noqotaa mid adag. Si kastaba ha noqotee, qadarka nikotiinta ee ku jirta dareeraha vapeine-ka ayaa aad uga yar marka loo eego nidaamyada kale ee gaarsiinta nikootiinta.
Dhacdooyinka qaarkood waxay kugu horseedi karaan inaad dib ugu dhacdo caado aad sameysay sanado. Taasi waa sababta ay muhiimka u tahay in laga guuro oo la raadiyo qaabab macquul ah oo lagu kalsoonaan karo.
caafimaad lehcaafimaadkacilmi baarissigaar cabindukaanka smartqabatinka
Dawooyinkee ayaa badanaa laga isticmaalaa Boqortooyada Midowday?
Boqortooyada Midowday - Caffeine ayaa weli ah tan loogu jecel yahay kicinta. Waxay ku jirtaa shaaha, kafee, wax badan ...
Xashiishka caafimaadku hadda waa bilaash Sicily
Xashiishadda caafimaad ayaa hadda laga heli doonaa bilaash gobolka Sicily, sida ku xusan amar ah in…
Canniin caafimaadku ma caawin kartaa carruurta maskaxda naafada ah ee leh dhibaatooyin dabeecadeed?
Daraasad cilmi-baaris ah oo ugu horreysa ayaa hadda lagu sameeynayaa Australia iyada oo loo marayo waxtarka daawooyinka ...